8 Ndị isi Apple na-enweta ihe karịrị 13 nde na mbak | Esi m mac
Asatọ n’ime ndị isi Apple Ha nwetara na mbido ọnwa a nke Eprel ụfọdụ nza nke amachibidoro maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ, nke ruru ihe ruru $ 13 nde ma ọ dịkarịa ala isii n'ime ha.
Dabere na United States Securities Commission, mbak ndị a bụ akụkụ nke atụmatụ mkpali nke ụlọ ọrụ Californian. Ndị nnata ahụ so na ndị ọzọ, osote onye isi oche Eddy Cue na Craig Federighi. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụghị Tim Cook n'etiti ha, mana o doro anya na onye isi oche nke Cupertino adabaghị na ngwugwu ahụ na-akpali akpali, nke enyere maka ndị nlekọta nke mpaghara ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị na-erite uru bụ ndị obodo Apple maara nke ọma. Ndị a bụ:
Jeff Williams, Apple si Chief Operating Officer,
Bruce sewell, SPV na General Ndụmọdụ,
Phil Schiller, Onye isi oche nke Marketing Worldwide,
Eddy cue, Onye isi oche nke Software na Ọrụ Internetntanetị,
Craig Federighi, Onye isi oche nke Software Engineering,
Dan riccio, Onye isi oche nke Engineering Engineering,
na ngụkọta nke ngwa ahịa 94.010. N'oge ahụ, mbak ahụ ruru ihe dịka $ 13.6 nde. Na mgbakwunye, Luca Maestri (Chief Financial Officer) na Angela Ahrendts (Apple Vice President of Retail) natara onyinye maka ọrụ ha ruru ihe ruru $ 6 nde. N’ụzọ dị otu a, Cue zụtara 236 mbak nke Apple na mbido afọ, n’okpuru Atụmatụ Purzụta Ndị Ọrụ (ESPP) nke ụlọ ọrụ ndị Cupertino.
Ihe nrite ndị a dịka mbak Ha na-abịa mgbe afọ gara aga nke ego agbadoro afọ n'ihi afọ ojuju ego emere na 2016. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Apple nwetara net uru nke $ 215.6 ijeri ahịa, arụmọrụ ahụ abụghị ihe a tụrụ anya ya, nke kọmitii akwụ ụgwọ nke ụlọ ọrụ ahụ setịpụrụ, ya mere, agbasaghị ego ndị a n'ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » 8 Ndị isi Apple na-enweta ihe karịrị 13 mbak